Tanadland Oo Mudo 6 Bilooda Yeelan Doona Dowlad Matesha Umadda Reer Tanadland – Codka Qaranka Tanadland
Galadda Ilaahay, shirkii umadda karaamaysan ee qaranka Tanadland waa’u najaxay. Maalintii jimcaha ahyd ee ay taariikhdu ahayd (22/12/2017), Goor casar liiqii ah ayaa shirka la soo gebogebeeyey laguna ducaystey. Waxaana lagu gaarey go’aamo dhaxalgal ah oo taariikhda geli doona. Umadda Tanadland waa umad soojireen ah oo guun ah. Waa umad balaaran oo taariikh fac weyn leh. Waxaa hubaal ah in ree Tanadland uu wakhti badani ka lumay, mudadii dheerayd ee aynu suuxdinta nacasnimada ah la jiifney. Ha yeeshee, maantay maaha inaynu wakhti isaga lumino dib u milicsiga waayihii xumaa ee aynu soo maray.
Ilaahay galaddiisa, maantay umadda karaamaysan ee Tanadland hadaynu nahay, inaga oo isku duuban ayeynu rabi talo saaranay. Dibna u laaban mayno ee horay ayeynu u soconaynaa. Taariikhdu iyadaa macalin ah oo umadaha koonka ku uuman wax barta. Ilaahayna umad aan iyadu is duleyn ma duleeyo. Sumcad xumada iyo sharaf dhaca umada reer Tanadland soo gaartey 22 -kii sanaddood ee ugu danbeeyey, waa mid aynu inagu isu geysaney. Ee maaha mid aynu cid kale ku eedayno.
Maantay waxaa inala gudboon inaynu gunimada ka baxno oo aynu aayaheena iyo mustaqbalka jiilalka danbe ee ubadkeena wixii dan u ah aynu ka shaqayno. Dadaal iyo karti aynu ku meel marino go’aan kasta
oo ay hogaamiye yaasheenu inoo gudoomiyaan ayaa laynookaga baahanyahay. Waxaa inagu waajib ah inaynu madaxdeena adeecno wax kasta oo ay inoogu taliyaan. Waxaa lama huraan ah inaynu madax deena u muujino qadarin iyo ixtiraam siyaado ah. Awaamiirta ka soo fusha hogaamiye yaasheenuna ay inoo noqdaan wax muqadas ah.
Maadaama aynu mudo dheer oo 22 sanaddood ah aynu nacasnimo la suuxsanayn oo u qayrkeen ina dhaafay, waxaa inala gudboon inaynu naftood hureyaal wada noqono mutadawiciin ah. Waxaa inala gudboon aduun naf iyo maal wixii lumahaya inaynaan dan ka gelin. Ee ay muhiimadeenu noqoto sharafteenii iyo sumcad deenii luntay sidaynu u soo ceshan lahayn.
Ergoda shirka beesha Tanade waxay isku raaceen in la dhiso Golaha Hoggaanka Beesha Tanade (GHBT), kana kooban 27 xubnood oo ay ka mid yihiin xildhibanada iyo dhammaan qeybaha bulshada reer Tanadland. Waxaa kaloo go’aan lagu gaarey in mudo 4 bilood ah lagu dhiso golaha hoggaanka umadda Tanadland. Marka la doorto golaha hoggaanka umadda Tanadland (GHBT) na, goluhu wuxuu dooran doonaa dowlad matesha umadda karaamaysan ee Tanadland.
Go,aanka Shirkii Beesha Tanade :-
Shirkii aayo-katalinta Beesha Tanade ee mudada bisha kabadan uga socday xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ayaa laga soo saaray go,aan ay beeshu ku laashay dhammaan wada shaqayntii maamulka Puntland. War saxaafadeed uu saxaafadda u akhriyay afhayeenka shirka mudane C/naasir Cabdille Saleebaan ayuu ku sheegay go,aanka geba gabadii shirkii Beesha Tanade uga socday Gaalkacyo.
Go,aanka beesha ayaa u qornaa sidatan:
1. Beesha Tanade waxaa u caddaatay in aysan waxba ku lahayn Matalaadda, Go’aannada iyo Talooyinka Masiiriga ah ee Dowlad-Goboleedka Puntland, isla markaana ay Puntland lumisay kalsoonidii shacabka Beesha Tanade, Sidaas darted, Beesha Tanade waxa ay kalsoonidii kala noqotay Maamulka Puntland, waxayna laashay dhammaan wada shaqeyntii Siyaasadeed ee ay la laheyd, inta heshiis, Saami-qaybsi dhab ah iyo Mataalad buuxda laga helayo.
2. Ergoda Shirka Beesha Tanade waxay isku raaceen in la dhiso Golaha Hoggaanka Beesha Tanade (GHBT), kana kooban 27 xubnood oo ay ka mid yihiin Xildhibanada iyo dhammaan qeybaha bulshada Beesha, Golahaas oo u xilsaaran Arrimaha Siyaasadda, Amniga, Bulshada iyo Deegaanka. Golahaas oo kaliya ayaa awood u leh inuu matalo Beesha Tanade, isla markaana Xiriir iyo Wada-xaajood la yeelan kara Dowlad-Goboleedyada., Dawladda Federal Soomaliya, Beesha caalamka iyo cid walba oo ay wax kala dhaxeeyaan.
3. Shirka Beesha Tanade waxa lagu go’aansaday in la dhiso 01-05-2018 Golaha Guurtida Beesha Tanade (GGBT), Inta laga gaarayo waqtigaas waxaa xilka Golaha Guurtida sii wadaya Xubno ku meel gaar ah oo ka kooban Isimada iyo 14 Nabadoon oo ay soo Wakiisheen dhammaan Nabadoonnada Beesha Tanade.
4. Beesha Tanade waxa ay mudnaan siinaysaa wixii dano, masaalix iyo xeerer ahaa ee kala dhexeeya Beelaha Puntland iyo kuwa aan ood-wadaagta nahay. 5. Beesha Tanade waxay ku baaqaysa in la ilaaliyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed, lana taageero Dawladda Federalka Soomaliya (DFS).
5. Beesha Tanade waxay ku baaqaysa in la ilaaliyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed, lana taageero Dawladda Federalka Soomaliya (DFS)
6. Beesha Tanade waxay ugu baaqaysaa DFS iyo Beesha caalamkaba in ay tix-galiyaan go’aannada Beesha, lana shaqeeyaan Golaha Hoggaanka Beesha Tanade (GHBT).
7. Beesha Tanade waxay ugu baaqaysaa Ummadda Soomaaliyeed nabad gaar ahaan Beelaha ku nool Gobolka Mudug inay isugu yimaadaan Shir nabadeed, kana tashadaan Aayaha iyo masiirka Gobolka, si loo soo af-jaro colaadaha soo noqnoqday ee naafeeyey horumarkii Gobolka, sababayna barakac, burbur naf iyo maalba leh, arrintaas oo Musiibo iyo ceeb ku ah Dadka Gobolka, waxayna ku baaqaysaa in wax kasta oo khilaaf ah lagu xaliyo wada hadal lagana fogaado gacan ka hadal.
8. Beesha Tanade waxay ka mid tahay Beelaha Soomaliyeed ee aaminsan nabada iyo isku tashiga.
Sidoo kale is dhex galka iyo wada noolanshaha. Iyadoo sida tahay ayey Beeshu ka tabanaysay cadaalad xumo dhanka mashaaricda horumarka iyo gargaarka Beesh Calamka oo uu Maamulka Puntland sameyey. Sidaa darted Golaha Hogaanka, Golaha Guurtida iyo shacabka Beeshu waxay ugu baaqayan dhamaan Dowladda Federalka, Hay’addaha Caalamiga iyo Maalgashayasha daneeya horumarka Soomaaliya in ay kala shaqeyan Beesha Tanade mashaaricda horumarka iyo soo kabsiga. Gacana buuxda ku siiyan.